Weather Underground: Forecasts 5.10.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.10.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ရာသီဥတု Weather Underground: Forecasts
Weather Underground: Forecasts ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုးလေဝသမြေအောက်ကမ္ဘာ့အများဆုံးတိကျ Hyper-ဒေသခံတစ်ဦးအပြန်အလှန်ရာသီဥတုကရေဒါအပြင်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, ဂြိုလ်တုမြေပုံနှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်ပေးပါသည်။ 270,000 ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသီဥတုဘူတာကနေတိုက်ရိုက် data ကိုသတင်းပို့ရာသီဥတုနိူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများက Powered, ဒီလူအစုအဝေးရင်းမြစ်မှရသည့်ဒေတာများကသင်၏တိကျသောတည်နေရာကိုပစ်မှတ်ထားတိကျမှုခန့်မှန်းချက်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
အမြဲအဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်ချက်တန်ဖိုးထားတယ်။ မည်သည့်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုအတူ feedback@wunderground.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်တို့သည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်သိရန်နှင့် Google Play စတိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုပြီး!
လက်ရှိ & အနာဂတ်ရာသီဥတုအခြေအနေ Check
●အဆိုပါအကြောင်းကြားစာ bar မှာအပူချိန်: ချက်ချင်းလက်ရှိအပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေကြည့်ရှုရန်
●, အပူချိန်အပါအဝင်သင့်ဒေသခံရာသီဥတုဘူတာမှလက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေ View လေတိုက်နှုန်း & ညှနျကွားခ, စိုထိုင်းဆ, နှင်းအချက်ကဲ့သို့ခံစားရ, မြင်ကွင်း
10 ရက်ကြာနေ့စဉ် & အလုပ်ချိန်နာရီရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူတစ်ပတ်●အစီအစဉ်
● Interactive မှရာသီဥတုမြေပုံကာတွန်းရေဒါ, ဂြိုဟ်တုများနှင့်အများကြီးပိုဒေတာနှင့်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းအပေါငျးတို့သပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသီဥတုဘူတာကိုပြသ
●စမတ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် - ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအဘို့သင့်စံပြရာသီဥတုအခြေအနေ set နဲ့ကျွန်တော်တဲ့အခါမှာသွားကြဖို့သင်ပြောပြပါ့မယ်
●လေထုအရည်အသွေး, ခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်း, နေထွက် & နေဝင်ချိန်များကဲ့သို့အသေးစိတ်ရာသီဥတုဒေတာ Explore နှင့် moonrise & moonset
●စိတ်ကြိုက်ရာသီဥတု Widgets တွေ - ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, အရွယ်အစားနှင့် update ကိုကြားကာလကနေရှေးခယျြ
●အလင်း & မှောင်မိုက်သည် Modes, မြေပုံအမျိုးအစားများ, ယူနစ်နှင့်ပြန်စီစဉ်အုပ်ကြွပ်နှင့်သင်၏ app ကိုအတှေ့အကွုံစိတ်ကြိုက်
ကမ္ဘာတဝှမ်းဘျထံမှ● Discover Real-time ရာသီဥတု
ကျွန်ုပ်တို့၏ 270,000+ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသီဥတုဘူတာအရှိဆုံးတိကျဒေသခံရာသီဥတုအခြေအနေသတင်းပို့ပါ။ ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသီဥတုဘူတာကနေစုဆောင်းသောဒေတာများကတခြားရာသီဥတုန်ဆောင်မှုများခန့်မှန်းချက်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အပျေါမှာအားကိုးသောလေဆိပ်ရာသီဥတုဘူတာအကြားကွာဟချက်အတွက်ဖြည် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကိုသင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အမှန်တကယ်ဒေတာမှတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်။
interactive ရေဒါမြေပုံ & ပြင်းထန်ရာသီဥတု
မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အများဆုံးအပြန်အလှန်ရာသီဥတုမြေပုံကိုသင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရေဒါ, ဂြိုလ်တု, ရာသီဥတုဘျနှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်ကာတွန်းလက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုထပ်ကနေ select လုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ တိကျတဲ့ရာသီဥတု data တွေကိုအလွှာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မြေပုံ Customize သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောမြေပုံရလာဒ်ကဒိကနေရွေးချယ်ပါ။ အစွန်းရောက်ရာသီဥတုအဘို့မျက်စိထွက်သိမ်းဆည်းထားပါနှင့်အမြဲပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့သတင်းပို့နေတဲ့ကောင်းကင်ပြာအခြေအနေများသင်အမှန်တကယ်စောင့်ကြည့်နေဘာတွေလုပ်နေလဲလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်သင်ကအခြား app ကိုအသုံးပြုသူများအများ၏အကျိုးအတွက်သင့်တည်နေရာအတွက်လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။ သဘာဝဘေးအစီရင်ခံစာများသင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌အခြားလူကိုကူညီမဆိုအန္တရာယ်ရှိသောလမ်းအခြေအနေအစီရင်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။
1995 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းရာသီဥတုဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, မိုးလေဝသမြေအောက်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်း apps များနှင့် website ကို wunderground.com ကနေတဆင့်ဦးဆောင်မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာအများအပြားမှရာသီဥတုဒေတာဖြေရှင်းချက်ဖြန့်ဖြူး။ မိုးလေဝသမြေအောက်အဆိုပါမိုးလေဝသကုမ္ပဏီတစ်ခုက IBM စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး, ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA. အခြေစိုက်
Weather Underground: Forecasts အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Weather Underground: Forecasts အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Weather Underground: Forecasts အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Weather Underground: Forecasts အား အခ်က္ျပပါ
zeusgamer စတိုး 106 54.83k
Weather Underground: Forecasts ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Weather Underground: Forecasts အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.10.1
ထုတ်လုပ်သူ Weather Underground
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.wunderground.com/members/tos.asp#privacy
App Name: Weather Underground: Forecasts
Release date: 2019-09-12 19:37:34
လက်မှတ် SHA1: 7C:B3:1E:DB:01:F8:C6:51:04:53:75:67:66:FF:46:1E:6F:A6:F5:14
ထုတ်လုပ်သူ (CN): John Celenza
အဖွဲ့အစည်း (O): Weather Underground
Weather Underground: Forecasts APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ